अर्थ र विकास – Page 8 – SamajKhabar.com
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको मूल्य लगातार बढ्दै गएको छ । पछिल्ला केही दिनदेखि लगातार उकालो लागेको अमेरिकी डलरको मूल्यले बुधबार नयाँ उचाई छोएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो १८ वर्षको तथ्यांक हेर्दा बुधबार अमेरिकी डलरको मूल्य सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि एक अमेरिकी....पुरा पढ्नुहोस
ठगी डेढ अर्बको, असुली २० करोडमात्रै !
काठमाडौं । एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा डेढ अर्बभन्दा बढीको ठगी भएको छ। यसरी ठगिएकामध्ये २० करोड रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत अर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा एक अर्ब ५२ करोड २० लाख ७१ हजार २५५ रुपैयाँ ठगी भएको छ। तर ठगी भएकामध्ये असुली दर निकै कम छ। विभागका अनुसार उक्त अवधिमा २०....पुरा पढ्नुहोस
शेयर बजारमा सुधारको संकेत
काठमाडौं । लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजारमा मंगलबार भने सामान्य सुधार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक १.३७ बिन्दुले बढेर एक हजार १७७.०९ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.१९ बिन्दुले बढेर २४८.६१ बिन्दुमा पुगेको छ....पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं । बिमस्टेकमा आवद्ध सबैजसो मुलुकसँग नेपालले ब्यापारघाटा ब्यहोरेको छ । भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार नेपालले भारतसँगको ब्यापारमा आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा ७ खर्ब ६४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको व्यापारघाटा बेहोरेको छ । गत आवमा नेपालले ८ खर्ब १० अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सामान भारतबाट....पुरा पढ्नुहोस
कुलेखानी – काठमाडौँ सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारले बनाउने
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने बताएका छन् । उनले सन् २०१२ मा उक्त सुरुङमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गर्ने भनी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सरकारसंँग सम्झौता गरे पनि हालसम्म कुनै काम नगरेकाले अब....पुरा पढ्नुहोस
नाडेपको सेयर सूचीकरण , लगानीकर्ताको आकर्षण
काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार सुरु भएको छ । नाडेपको १६ लाख कित्ता सेयर बिहीबार नै सूचीकृत गरी कारोबार पनि सुरु भएको हो । नाडेपले पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १९९ रुपैयाँ देखि ५९७ रुपैयाँ ओपन रेन्ज पाएको छ । कम्पनीको सेयर कारोबार संकेत पनि नाडेप (एनएडीइपी) नै तोकिएको छ ।....पुरा पढ्नुहोस
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले डेढ अर्बको आइपीओ ल्याउने तयारी
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिको प्राथमिक शेयर अर्थात आइपीओ सर्बसाधारणमा बिक्री गर्न प्रकृया अगाडि बढाएको छ । कम्पनिले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर बिक्री गर्न राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी आरविवि मर्चेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई धितोपत्र....पुरा पढ्नुहोस
बेरोजगारलाई काम दिन नसके भत्ता दिइने !
काठमाडौं । सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई कम्तिमा सय दिनको रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्ने भएको छ। रोजगारीको हक कार्यान्वनयनका लागि श्रम मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा सय दिन रोजगारी दिने प्रस्ताव....पुरा पढ्नुहोस
आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतबाट घट्दैन : राष्ट्रबैंक
काठमाडौं । काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हासिल हुनेमा आशङ्का नगर्न संसदीय समितिलाई आश्वस्त तुल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा, आर्थिक समितिको मंगलबारको बैठकमा बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले पछिल्ला दुई वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा भएको....पुरा पढ्नुहोस
सेयर बजार ओरालोमै, १८ करोडको कारोबार
काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार पनि सेयर बजार घटेको छ । सेयर बजार परिसूचक चार दशमलव १८ अंकले घटेर ११ सय ८३ दशमलव ८९ विन्दुमा झर्दा सेन्सिटिभ शुन्य दशमलव ८३ अंकले घटेर दुई सय ४९ दशमलव ९२ विन्दुमा झरेको छ । एक सय ६१ कम्पनीहरुको तीन हजार दुई सय २४ वटा कारोबारमा पाँच लाख ७० हजार एक सय ७३ कित्ता....पुरा पढ्नुहोस